Yan Aung: Fund ကောက်ခံရေးနှင့် Statistics တစ်ချို့
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ထားတာပါ.
Fund Strategy Recap:
(ကိုဝေယံလင်း၊ ကိုဇင်ကိုလတ် တို့က အသီးသီး ကောက်ခံပြီး ရန်ကုန်ပြန်မယ့် လူကြုံတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ထည့်ပေးပါ.(သို့) ကိုကျော်ဇေယျ Account ထဲကို လွှဲပေးပါ)
(ကိုကျော်ဇေယျနဲ့ မသဉ္ဇာတို့က မလေးရှားမှာရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို အရင်စည်းရုံးပြီး Fund ကောက်ခံပေးပါ.)
(Paypal Button နှိပ်ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ကိုစိုးဇေယျဆီကို Individually ပဲဖြစ်ဖြစ် လွှဲပေးပါ)
(ကိုစိုးဇေယျ၊ ကိုစေတန်၊ ကိုနေဘုန်းလတ်၊ ကိုမျက်လုံး တို့အပြင် ကူညီနိုင်မယ့် အင်အားစုတွေကို စည်းရုံးပြီး Fund ကိုစတင်ကောက်ခံပေးပါ)
၅. ပိုကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်များရှိရင် ဆွေးနွေးပေးကြပါ.
ပါဝင်မယ့် ဘလော့ဂါစာရင်းကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ အားလုံးကို Email ပို့ပါမယ်. Reply ပြန်ပေးပါ.
မကြာမီ ပို့ပါမယ်. လောလောဆယ်မှာ နိုင်ငံအလိုက် စာရင်းလုပ်နေလုိ့ပါ. နောက်ထပ် ပါဝင်ချင်သူများကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်...
နောက်တစ်ခုက ပုံနှိပ်တိုက်တစ်ခုနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဈေးနှုန်းစာရင်း အကြမ်းဖျင်းသိရဖို့ မေးထားပါတယ်. ကိုစိုးဇေယျစုံစမ်းပေးမယ့် ဈေးနှုန်းကိုလည်း သိချင်ပါတယ်.
Fund ကောက်ခံရေးကိစ္စကို ဒီတစ်ပတ်နောက်ဆုံးထား ဆွေးနွေးပါမယ်. ပိုပြီးထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ Idea လေးများရရင် ၀င်သာဆွေးနွေးပေးကြပါ. အားမနာပါနဲ့
စင်ကာပူက ဘလော့ဂါများပါတယ်. ၁၀ ယောက်ကနေ ၁၅ ယောက်ထိ ရဖို့ Target ထားပါတယ်. မလေးရှားမှာ ကိုကျော်ဇေယျနဲ့ မသဉ္ဇာကိုပဲ သိထားပါသေးတယ်. မြန်မာပြည်က ပါဝင်မှာကို ၇ ယောက်ကနေ ၁၀ ယောက်ထိ မှန်းထားပါတယ်. Europe က ပါဝင်မယ့် ဘလော့ဂါ အရေအတွက်ကိုလည်း ၅ ယောက်ကနေ ၁၀ ယောက်ထိ မှန်းထားပါတယ်
Minimum Contributors ......... 10 +2+7+5= 24
Maximum Contributors ........ 15 +2+ 10 + 10 = 37
အမာခံ ဘလော့ဂါများက ၇ ယောက်ရှိပါတယ်. ကိုစိုးဇေယျ၊ ကိုကျော်ဇေယျ၊ ကိုဝေယံလင်း၊ ကိုဇင်ကိုလတ်၊ ကိုနေဘုန်းလတ်၊ မအိမ်ချမ်းမြေ့၊ နဲ့ ရန်အောင် ပါ. အမာခံဆိုတာ စာအုပ်ကို မဖြစ်မနေထုတ်ဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေပါ. လိုအပ်ရင် လိုသလောက် ပမာဏကို စိုက်ထုတ်ပေးသွားဖို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ သူတွေပါ.
အမာခံထဲကို Join ချင်သူများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.
အပေါ်က Statistics ကိုပြန်ကြည့်ပြီး ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကို စာမူ တစ်ပုဒ်နှုန်းနဲ့ တွက်ရင် စာမူ ၂၅ စောင်ကနေ ၄၀ အတွင်းမှာရှိပါမယ်. စာမူတစ်ပုဒ်ကို စာမျက်နှာ ၄ ရွက်ပေးကြည့်မယ်. စာရွက်အရေအတွက် ၁၀၀ ကနေ ၁၆၀ ရှိပါမယ်. ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ စာရင်း အကြမ်းဖျင်း တွက်လို့ရပါပြီ.
တစ်ယောက်ကို USD 30 ထည့်ဝင်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်. Exchange Rate ကို ၁၂၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ပါမယ်.
25 * 30 = $ 750 ( 1200 Kyats * 750 = 900,000....9သိန်းတိတိပါ)
37 * 30 = $ 1110 (1200 Kyats * 1110 = 1,332,000 .... 13 သိန်းနဲ့3သောင်း နှစ်ထောင်ပါ.)
ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ Fund မထည့်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ စာမူဘယ်နှစ်ပုဒ်လောက် ထည့်နိုင်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွက်ကြည့်လို့ ရပါပြီ...သိပ်များများတော့ ထည့်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး. ဒါကို Board Committee က ဆုံးဖြတ်ပါမယ်. လောလောဆယ်မှာ အားလုံးကိုယ်စီကိုယ်ဌ ထည့်ဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်.
ဟုတ်ကဲ့. ဂဏန်းပေါင်းစက်ကိုပဲ သုံးပါတယ်. တွက်တာတွေမှားရင် ကျွန်တော့်အပြစ်မဟုတ်ပါ. ဂဏန်းပေါင်းစက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
I don't seems to catch up with the funding and stuffs. neway, count me in with the group. :)
Thanks for your help, Barnyar. Of course, I will add you in our group, Die-Hard Bloggers.